‘Niova Izao Tontolo Izao’: Lohateny Vaventy Avy Amin’ny Gazety Iraniana Ho Setrin’ny Fifanarahana Nataon’i Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Jolay 2015 6:15 GMT
Nitantara ny fifanarahana momba ny nokleary avokoa ny pejy voalohan'ny gazety mpivoaka isan'andro ao Iran tamin'ny Alarobia 15 Jolay. Pikantsary avy amin'ny www.jaaar.com.
Sehatra itsapana ny fahasamihafana misy eo amin'ireo antoko politika ao amin'ny firenena ny tontolon'ny fampitam-baovao ao Iran. Na izany aza, tamin'ny Alarobia 15 Jolay, toa eo amin'ny pejy iray avokoa ireo mpamoaka lahatsoratra isan-karazany tao amin'ny firenena, izany hoe, nibahana tamin'ny fitantarana ny vaovao momba ny fifanarahana nokleary manatantara.
Toa hita fa nankasitrahan'ireo ireo antoko maro isan-karazany ny vaovaon'ny fifanarahana eo amin'i Iran sy ny firenena P5 + 1 (Etazonia, Angletera, Alemaina, Frantsa, Rosia ary Shina). Antenaina hanokatra lalana ho fampandrosoana ny toekarena ao Iran ny fifanarahana satria midika ho fanalana ny sazy iraisampirenena ho takalon'ny famerana ny fandaharan'asa nokleary ao amin'ny firenena.
Ny fanambarana sahisahy indrindra dia avy amin'ny Etemaad, gazety reformista nilaza hoe “Niova Izao tontolo izao” tamin'ny lohateniny lehibe. Namaritra ny daty Persa 23 Tir 1394 (14 Jolay 2015) toy ny andron'ny “revolisiona diplomatika” izy. Ny lehiben'ny famoahan-dahatsoratry ny Etemaad (midika hoe matokia amin'ny teny Persiana) dia i Elias Hazrati, reformista malaza ho akaiky an'i Mehdi Karroubi, iray amin'ireo mpitarika ny Hetsika Maitso 2009 mbola ambenana manokana ao an-trano hatramin'izao.
Manazava ny gazety Reformista Etemaad, “Revolisiona diplaomatika ny datin'ny 23 Tir 1394. Niova izao tontolo izao. Tonga tamin'ny fifanarahana ihany ireo andiana fifampiraharahana nifanaovana nandritra ny 12 taona.”
Eny tokoa, ho setrin'ny vaovaon'ny fifanarahana, nibahana tamin'ny ankamaroan'ireo fankalazana teny an-dalambe ny Talata alina ny fihetseham-po reformista sy ny resaka Hetsika Maitso 2009. Narahina hira ny dihy ary feon'anjombona mba hamotsorana an'i Mehdi Karroubi sy Mir Hossein Mousavi, lehiben'ny mpanohitra sy kandida filoham-pirenena tamin'ny 2009 ary mbola tazonina any am-ponja hatramin'izao fotoana izao.
RT @mrezarostami: mihira ny vahoaka hoe “Mazava ny hafatray! Tsy Maintsy Faranana ny Fitazonana tsy hivoaka ny trano [an'i Karroubi & Mosavi] “
Tsy nilaza ny momba izany fankalazana izany tao amin'ny pejy voalohany ny ankamaroan'ny gazety Iraniana, fa nifantoka tamin'ny vaovao avy amin'ny fomba fijery politika.
Nanao fitantarana tsy miandany momba ny fifanarahana mihitsy aza ny gazety Kayhan malaza ho hiringiriny. Tao anatin'ny volana vitsivitsy ny gazety dia nitsikera mafy ny ekipa mpanao fifampiraharahana sy ny fandeferana manoloana ireo firenena Tandrefana mba ahatongavana amin'ny fifanarahana.
Maro matetika ireo mahita ny Kayhan ho toy mpitondrateny tsy ofisialin'ny biraon'ny Mpitarika Faratampony sy fihetseham-po mpandala ny nentin-drazana hiringiriny ao Iran. Notendren'i Khamenei mivantana i Hossein Shariatmadari, lehiben'ny tonian-dahatsoratry ny gazety. Mifandray amin'ny sampam-pitsikilovan'i Iran i Shariatmadari ary manampahefana Mpiambina Revolisionera teo aloha. Ny Kayhan ihany koa dia sokajiana ho toy ny fikambanam-pitsikilovana misahana ny famoronana tranga hanoherana ny mpanohitra sy ireo mitsikera ny fitondrana ao anatin'ny firenena sy ny any ivelany.
Ny fonongazety Kayhan tamin'ny talata no nametraka baraingo raha iny no dingana farany tamin'ny fifampiraharahana nifanaovana nandritra ny 12 taona, mifangarika amin'ny tsikera mahery vaika mahazatra fanaony amin'ny delegasiona mpanao fifampiraharahana sy ny fizotran'ny fifampiraharahana izany. Tsara homarihina fa ny 12 taona lazain'ny Kayhan dia ny fiandohan'ny fiadidian'i Ahmadinejad, raha nanomboka nandray ny fiarahamonina iraisampirenena ifampiraharahana tamin'ny fandaharan'asany nokleary i Iran. Nofaranan'ny Filan-kevi-piarovan'ny Firenena Mikambana tamin'ny alalan'ny fametrahana sazy izany fifampiraharahana izany tamin'ny taona 2006 rehefa tsy nety nampiato ny fandaharan'asany fampanomezankery ny oranioma i Iran.
Ny pejy voalohan'ny gazety ao Tehran tamin'ny Talata 23 Tir, izay mitsinjo sy manohana ny famaranana ny fifanarahana nokleary.
Taorian'ny fahavitan'ny fifanarahana, nahitana ity lohateny ity ny vaovaon'izy ireo tamin'ny Alarobia: “Avy amin'ny fahasamihafana tantara roa 180 degre mankao amin'ny fifanarahana tokana,” mankasitraka ny zava-bita tamin'ny fifanarahana manan-tantara teo amin'ireo mpifahavalo taloha.
Pejy voalohan'ny Kayhan tamin'ny Alarobia 15 Jolay milaza hoe “fahasamihafana tantara 180 degre niafara tamin'ny fifanarahana tokana”.
Nandray fijery somary nasionalista kokoa ny gazety hafa manoloana ny vokatry ny fifampiraharahana. Gazety reformista ny Ebtekar izay niaina korontana hatramin'ny fiandohan'ny fitondran'ny filoha Hassan Rouhani, noterena nikatona vetivety izy tamin'ny Aprily 2014. Namoaka lohateny lehibe manaitra ity gazety ity izay mampitaha an'i Javad Zarif, minisitry ny raharahambahiny nitarika ny fifampiraharahana sy ny Praiminisitra nasionalista malaza tao Iran Mohammad Mossadegh. Nalaza tamin'ny fangalana ho fananam-panjakana ny indostrian'ny solitany teo am-pelatanan'ny fitondrana Britanika tamin'ny 1951 i Mossadegh.
Mampitaha ny zavatra nataon'i Mossadegh tamin'ny solitanin'i Iran sy ny zavatra nataon'i Zarif tamin'ny fandaharan'asa nokleary tao amin'ny firenena ny sary miseho miaraka amin'ny lohateny hoe “Vanim-potoana Iraniana”.
Pejy voalohan'ny Ebtekar mampitaha ny nataon'ny Praiminisitra teo aloha Mohammad Mossadegh naka ho fananam-panjakana ny indostrian'ny solitany ao Iran sy ny nataon'ny Minisitry ny raharahambahiny Javad Zarif tamin'ny fandaharan'asa nokleary ao Iran.
Ho hita eo raha marina izany filazana hipoiran'ny vanim-potoana vaovao izany. Maro sahady ireo tao amin'ny haino aman-jery sosialy no nilaza ny “fanantenana mila fahamalinana” mikasika izay ho dikan'izany amin'ny fiainana andavanandro Iraniana. Nahazo tsara izany fihetseham-po izany ny hiaka iray teny an-dalamben'i Tehran:
Hira mahafinaritra tamin'ny alina “Vita ity fifanarahana ity, ny zo sivilintsika no ifanarahana manaraka”.